'Anofara Muti Shamwari' Musiki Akaita Nyowani (Zvakanyanya) Zvikamu Zvishoma
musha Horror Varaidzo Nhau 'Anofara Muti Shamwari' Musiki Akaita Nyowani (Zvakanyanya) Zvikamu Zvishoma
by Timothy Rawles July 29, 2021
by Timothy Rawles July 29, 2021 1,531 maonero
Musiki we "Anofara Muti" mugadziri, Kenn Navarro, ane nyowani (ish) maviri-chikamu chewebhu nhepfenyuro inonzi "D_Void," Uye ino nguva yakaiswa muchadenga.
Kare kumashure muna1999 apo Adobe Flash yakanga iri chinhu, chipfupi chine nharo chine hupenyu chinonzi "Anofara Muti Shamwari”Yakatanga kubudiswa paindaneti uye mukurumbira wakazvarwa wakazvarwa.
Yakagadzirwa naAubrey Ankrum, Rhode Montijo, naKenn Navarro veMondoMedia, "Happy Tree Shamwari" yakaratidza zvisikwa anthropomorphic woodland zvisikwa zvakabatwa - pamwe nekugunun'una ku "Final Destination" - kupenga tsaona munzira dzinotyisa.
Iyo yakateedzana uye yayo viscera yakafananidzwa neiyo yeiyo show-mukati-a-show "Itchy uye Scratchy" kubva ku "The Simpsons." Nekudaro "Anofara Muti Shamwari" inokwidza gore kusvika kumatanho epamusoro, kusanganisira impalings, decapitations, disembowelments uye nezvimwe zvakawanda.
Iyo yakakurumidza kuve chitendero chakarova pakati pepop tsika phenom ine mutengo unodhura episode maDVD, zvigadzirwa zvinowanzo kuwanikwa pamashefu ezvichangobva kupera Fry's Electronics, uye Comic-Con mapaneru. Mumwe anoshamisika kuti sei Funko haasati abata rezinesi nekuda kwekufunga.
Iyo showa yakave mainstay paG4's Barbed Wire Bhisikiti. Chiteshi cheMTV cheEuropean chakachiisa mumutsara wavo nekubudirira kukuru. Anenge makore makumi maviri gare gare, mu20, "Anofara Muti Shamwari" yakaburitsa yayo yekupedzisira akateedzana ezvitsva mabundled episodes.
Asi kukosha kweakateedzana kunorarama nekuti musiki wepakutanga Navarro adzoka neese-matsva mapfupi uye ese-matsva mavara. Kunyangwe isiri chikamu che HTF zvakasikwa, D_Void pachinzvimbo nyeredzi katsi, imbwa, uye shiri (kusvika parizvino) seafated astronaut vanochengeta vashandi muchadenga.
Maitiro ehupenyu akachinja. Hapasisina vedu "vanyajambwa" vakadhonzwa nemavara ane simba neakawandisa katuni, maziso ane bulbous, kawaii-mhando manas, mhuka dziri D_Void zvakanyanyisa kuvharika uye zvakasviba zvakasviba (iro ropa richiri rakafanana).
Kuchengeta neiyo "isinganzwisisike tsaona" theme, iyi nyowani nyowani inochengetedza mweya weropa weakautangira kunyangwe hazvo zvishoma zvishoma graphic. Kune zvikamu zvishoma chete kusvika parizvino, yekupedzisira ichiburitswa rinenge gore rapfuura.
Iko hakuna izwi pane zvimwe zvikamu, asi isu tiri kufarira mafambiro echipo chitsva ichi chiri kuenda.
Musoro wemufananidzo: "Anofara Muti Shamwari" - MondoMedia